ICryptocurrency Archives-Funda ukuRhweba
I-Congressman yase-US iFayile iBhili yokumisa i-Federal Reserve ekuKhupheni i-CBDC ngokuthe ngqo kumntu ngamnye
NgoLwesithathu, iCongressman yase-US uTom Emmer wazisa umthetho oyilwayo omtsha kwiCongress owalelayo "I-Federal Reserve ekukhupheni imali yedijithali yebhanki ephakathi (CBDC) ngokuthe ngqo kubantu."
UEmmer wachaza ukuba amazwe afana neTshayina "Phuhlisa ii-CBDCs ezishiya izibonelelo kunye nokhuseleko lwemali." Ucebise, endaweni yoko, ukuba umgaqo-nkqubo wemali yedijithali yase-US kufuneka uqinisekise ubumfihlo bezemali, udibanise ubukhosi bedola, kwaye ukhuthaze ukusungula izinto ezintsha. Umenzi womthetho ucebise ukuba iFed inakho "Zihlanganisele kwibhanki yokuthengisa, iqokelele ulwazi oluchongayo kubasebenzisi, kwaye ilandelele utshintshiselwano lwabo ngokungenasiphelo" ukuba iya ngqo CBCD indlela. Ummeli weRiphabhlikhi. Lumkile:
"Le modeli ye-CBDC ayizukubeka phakathi ulwazi lwezemali lwabantu baseMelika, ibashiya besengozini yokuhlaselwa, kodwa inokusetyenziswa njengesixhobo sokuhlola abantu baseMelika abangasoze basinyamezele kurhulumente wabo."
U-Emmer waphinda waphawula: "Ukufuna abasebenzisi ukuba bavule iakhawunti kwi-Fed ukufikelela kwi-CBDC yase-US kuya kubeka i-Fed kwindlela efihlakeleyo efana nolawulo lwedijithali lwaseTshayina."
Ummeli waseMinnesota uphendule wathi:
"Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Fed ayinayo, kwaye akufanele, ibe negunya lokubonelela ngee-akhawunti zebhanki." Ukwagxininise ukuba "nayiphi na i-CBDC ephunyezwe yi-Fed kufuneka ivuleke, ingabinamvume, kwaye ibucala."
I-Congressman yase-US u-Tom Emmer Ulumkisa ngokuchasene neziPhumo eziBambisayo zokukhupha i-CBDC eNgqo
Ummeli uTom Emmer uqukumbele ngelithi: "Ukuze kugcinwe imeko yedola njengemali egcinwe kwihlabathi kwixesha ledijithali, kubalulekile ukuba i-United States ikhokele ngendlela ebeka phambili izinto ezintsha kwaye ayijongi kukhuphisana necandelo labucala."
Okwangoku, i-Fed ayisayi kupapasha ingxelo malunga nenkqubela phambili ye-CBDC ecetywayo, eyabhengeza ukuba iya kuqaliswa kwi-2021. Oko kwathiwa, uSihlalo we-Fed uJerome Powell usanda kuqinisekisa ukuba ingxelo iya kupapashwa. "kwiiveki ezimbalwa."
tags I-DCDC, Cryptocurrency, iindaba, US
US Federal Trade Commission Alerts Public of New Viral Crypto ATM Scam
I-United States Federal Trade Commission (FTC) kutshanje isasaze isilumkiso sobuqhophololo malunga ne-cryptocurrency automated teller machines (ATM). Isilumkiso esithunyelwe nguCristina Miranda kwiCandelo leKhomishini yabathengi kunye nemfundo yezoshishino yaphawula ukuba:
"Kukho into entsha ejikelezayo kwi-scammers ecela abantu ukuba bahlawule nge-cryptocurrency.
Ibandakanya umntu ozenza ongenguye, ikhowudi ye-QR, kunye nohambo oluya evenkileni (olukhokelwa ngumntu okhohlakeleyo efowunini) ukuthumela imali yakho kubo nge-cryptocurrency ATM. "
Esi saziso sidize ukuba amaqothaqikili anganxibelelana namaxhoba angacingelanga, azenze ngathi avela kurhulumente, abezomthetho, okanye inkampani yasekuhlaleni eluncedo. Ezi scammers zizenza ngathi zithandana ngokufanelekileyo odibene naye kwi-intanethi okanye inkampani yelotho efowunayo ukukwazisa ngeeloyiso zobuxoki. Ngokucacileyo, aba baqhathi bahlala benxibelelana nawe efowunini de injongo yabo ekhohlakeleyo ifezekiswe.
IKhomishoni yoRhwebo ye-Federal Ichaza ukuba ezi ziQhosha Zenzeka njani
I-FTC ichaze ukuba aba baphuli-mthetho bazakwenza oko "Ukuyalela ukuba utsale imali ebhankini yakho, utyalo-mali, okanye kwiakhawunti yomhlalaphantsi." Emva koko, bayakukholisa ukuba uye evenkileni nge-crypto ATM kwaye uthenge i-cryptocurrency. Emva koko bathumela ikhowudi ye-QR kunye nedilesi ye-wallet yabo efakwe kuyo kwixhoba elingalindelekanga.
I-FTC iphinde yacacisa: Nje ukuba uthenge i-cryptocurrency, baye baskena ikhowudi, ukuze imali idluliselwe kubo. Kodwa imali yakho iphelile." IKomishoni yaqinisekisa ukuba:
Akukho mntu ovela kurhulumente, abezomthetho, inkampani eluncedo, okanye umxhasi wamabhaso uya kuze akuxelele ukuba ubhatale nge-cryptocurrency.
Ekugqibeleni, isaziso sifundeka ngolu hlobo: “Ukuba kukho umntu oyenzayo, bubuqhophololo ngalo lonke ixesha. Nayiphi na i-tweet engalindelekanga, umbhalo, i-imeyile, umnxeba, okanye umyalezo wonxibelelwano lwentlalo-ngakumbi ovela kumntu ongamaziyo-okucela ukuba uhlawule kwangaphambili ngento ethile, kubandakanywa ne-cryptocurrency, bubuqhophololo.
tags Ii-ATM zeCrypto, Cryptocurrency, iindaba, SISKEMU, IKomishoni yoRhwebo yase-US
IBitcoin ka-2022 iThelekelelo yeXabiso: IBullish Bias iBuyisa phakathi kwamanani aMatyebi wokunyuka kwamaxabiso e-US
Kwinguqu engalindelekanga yeziganeko ze Bitcoin (BTC) kunye nemarike ye-crypto ebanzi, i-bullish sentiment ibuyile, inceda i-market stop ye-bearish yangaphambili.
I-benchmark cryptocurrency irekhode eyona ntshukumo yandisiweyo ye-bearish ukusukela ngo-2018 kwiveki yokuvula kaJanuwari, njengoko abahlalutyi abaninzi belumkisile ukuba ukuthengiswa okukhulu kunokwenzeka nje ukuba i-cryptocurrency iphuke ngaphantsi kwesiseko esibalulekileyo se- $40,000 sezengqondo.
Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin ithengisa kwi-43,800 yeedola, emva kokunyuka kwe-$ 44,300 ngasekupheleni kwezolo. Ngokwezibalo zeCoinMarketCap, i-BTC ithengise nge-1.3% kwiiyure ezidlulileyo ze-24 kunye ne-2.19% kwiintsuku ezisixhenxe zokugqibela.
Ngokucacileyo, i-benchmark cryptocurrency yonyuka ngexabiso emva kwengxelo yokunyuka kwamaxabiso eyoyikekayo kuqoqosho lwehlabathi, emva kokuba idatha yezoqoqosho ibonise ukuba izinga lokunyuka kwamaxabiso e-US ngoDisemba lifike kwi-7%, eli nani liphezulu lokunyuka kwamaxabiso kwiminyaka engamashumi amane. Nangona i-economists yaxela kwangaphambili esi siphumo kwakudala, imarike ye-crypto kunye nezinye iimarike zezimali zasabela ngobundlobongela kuyo.
Abahlalutyi bachaze ukuba ixabiso elihlayo ledola yaseMelika sesinye sezizathu eziphambili zokuba abatyali-mali bakhukulise iBTC, edla ngokuchazwa njenge. "Igolide yedijithali" ngenxa yesixa esilinganiselweyo kunye nepropathi yothango lokunyuka kwamaxabiso.
Nangona kunjalo, abatyali-mali baye bacetyiswa ukuba balumke ekuhambeni kwabo kwimarike ye-crypto njengoko iFederal Reserve kulindeleke ukuba inyuse izinga lenzala yayo ubuncinane amaxesha amathathu ngo-2022 njengendlela yokulwa nokunyuka kwamaxabiso.
Uqikelelo loNyaka lweBitcoin (2022)
Ekubeni ifikelele kwi-69,000 yeedola eziphezulu kwixesha lonke ngoNovemba 10, 2021, i-BTC igcine i-trajectory ephantsi ephantsi, okwangoku, ngoJanuwari 10. Oko kwathiwa, i-benchmark cryptocurrency ngoku i-rebound evela kwingozi, njengoko ifumene inkxaso evela kwindibaniselwano yamanqaku obugcisa adibanisa malunga ne-40,000 yeedola.
I-BTCUSD - Itshathi yeVeki yeGemini. Umthombo: TradingView
Ngokucacileyo, i-cryptocurrency ephambili ngoku ijikeleze umgama obalulekileyo okhokele i-bearish spiral ukusukela ekuqaleni kukaNovemba. Oko kwathiwa, ulawulo oluzinzileyo ngaphezu kwalo mgca kwiintsuku ezizayo kunye neeveki kufuneka zincede i-BTC ikhuphe uxinzelelo lwe-bearish kunye nokubeka kwakhona ukubetha kumjikelo wangaphambili we-bullish. Olu qikelelo lwe-bullish lufumana inkxaso kwi-trendline enyukayo yeenyanga ezilishumi elinesine, indawo ye-pivot kaJulayi, kunye ne-40,000 yenkxaso yomgca wenkxaso.
Kuya kuba mnandi ukubona ukuba isenzo sexabiso le-BTC sidlala njani kwiintsuku kunye neeveki ezizayo njengoko i-bullish sentiment ibuya. Ngokomntu, ndilindele ukubona i-BTC ibetha i-tag yexabiso le-100,000 yeedola ngo-2022.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-45,000 yeedola, i-46,000 yeedola, kunye ne-46,300 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$43,000, i-$42,000, kunye ne-$41,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 837.8 billion
I-Bitcoin Dominance: 39.8%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, yaqikelelwa, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
IBhanki yaseJapan ukuba iGcine uMgaqo-nkqubo wezeMali oLawulayo kakhulu phakathi kokuhla okunokwenzeka
Ukuhlaziywa: 12 January 2022
Abahlalutyi beemarike balindele ukuba iBhanki yaseJapan (i-BoJ) ilungelelanise uqikelelo lwexabiso layo elimiselwe ukukhutshwa kwiveki ezayo ukuya phezulu, njengoko abathengi beqala ukuva umphumo weendleko eziphezulu zempahla. Nangona kunjalo, ibhanki igxininise isigqibo sayo sokugcina umgaqo-lawulo wolawulo-mali ukhululekile njengoko izinga lokunyuka kwamaxabiso elizwe lihlala lingaphantsi kwe-2% ekujoliswe kuyo.
Ibhanki ephezulu kulindeleke ukuba iqaqambise imingcipheko eyayanyaniswa nomqolo wamva nje kwimeko ye-Omicron coronavirus kodwa inokugcina umbono wokuba uqoqosho lwaseJapan lusendleleni yokuchacha ngokuthe ngcembe ekuwohlokeni okubangelwe yi-COVID-19 kunyaka ophelileyo.
Ngaphezu koko, i-BoJ kufuneka ivakalise ukugcinwa kwethagethi yayo yexesha elifutshane lenzala kwi--0.1% kunye ne-10 ye-bond ye-bond ye-0% ekuhlaziyweni kwayo komgaqo-nkqubo ocwangciselwe ngoMsombuluko ozayo ukuya ngoLwesibili. Oko kwatsho, abahlalutyi be-SMBC Nikko Securities babhale kwinqaku lophando ukuba: "I-BOJ inokuphucula uqikelelo lwexabiso layo kodwa isaza kwenza i-inflation ihlale malunga ne-1.5% kwi-fiscal 2023. Oko kuthetha ukuba ukulungiswa komgaqo-nkqubo wezinga le-BOJ kuphelile kumakhadi kulo nyaka."
Ngokungafaniyo ne-US, elwa nokunyuka kwamaxabiso okunyuka kwamaxabiso, i-BoJ ihlala igxile ekuthinteleni ukuhla kwexabiso lentengo njengoko inkcitho yekhaya ehlwempuzekileyo kunye nokukhula komvuzo kuthintela ukunyuka kwamaxabiso kwabathengi ngo-zero. Nangona kunjalo, izalathisi ezintsha zotshintsho kwindlela yokubeka amaxabiso eshishini zibangele ingxoxo phakathi kwabaqulunqi bomgaqo-nkqubo malunga nokunyuka kwamaxabiso ngo-2022.
Ngeli xesha, iintelekelelo zokunyuka kwamaxabiso eenkampani kunye nemizi zixhumeke zaya kutsho kwiminyaka emininzi njengoko irekhodi yamva nje yokunyuka kwexabiso lentengo ibangele ukuba iifemu ezininzi zidlulisele uxanduva lokunyuka kweendleko kubathengi.
Bank of Japan Survey Bonisa Spike in Firm Retail Price Ukunyuswa
Uphando lwakutsha nje lweshishini le-BoJ, elibizwe ngokuba "ingxaki," ibonise ukuba kukho ukonyuka kwenani leefemu ezirekhoda ukunyuka kwamaxabiso okuthengisa. Ngokophando, abathengi bahlawuliswa ngaphezulu kwempahla, ukusuka kwipetroli ukuya kumgubo kunye neoyile yokupheka.
Nangona kunjalo, iReuters isanda kunika ingxelo yokuba imithombo yangaphakathi ithi i-apex bank inokuthi inyuse i-inflation ye-2022 ukuqala ngo-Epreli, ngokwengxelo yayo yekota.
Oko kuthethiweyo, irhuluneli ye-BoJ uHaruhiko Kuroda unokutsho ukuba iimeko zezimali ziya kuhlala zikhululekile eJapan, nanjengoko i-US ibhengeze ukuba izakuba nokunyuka okuthathu kulo nyaka.
tags IBhanki yaseJapan, BoJ, Cryptocurrency, iindaba
Umphathi we-SEC uGary Gensler uKhanya kwiCrypto Regulation Plans yi-Arhente yakhe ngo-2022.
US Securities and Exchange Commission (SEC) uSihlalo uGary Gensler wenza iintetho malunga nolawulo cryptocurrency kwaye watyhila izicwangciso arhente yakhe 2022 kudliwano-ndlebe kunye CNBC ngoMvulo.
Indoda enye ye-SEC yachaza ukuba: "Ukuba unyusa imali eluntwini, kwaye uluntu lulindele inzuzo esekwe kulo mxhasi, umxhasi, iinzame zelo qela-iphakathi kwemithetho yokhuseleko, kwaye ingaphakathi kwemithetho yokhuseleko kuba iCongress ipeyintwe ngebrashi ebanzi. " UGensler wongeze ukuba:
“Bafuna ukukukhusela—luluntu olutyala imali—ukuze ube nolwazi olufanelekileyo, okanye oko kubizwa ngokuba lulwazi olupheleleyo nolunobulungisa, kwaye likukhusele kubuqhophololo nakumaqola nokunye okunjalo.
Usihlalo we-SEC waxoxa ukuba utyalo-mali oluzihlela njengamathokheni "kusenokwenzeka ukuba, mhlawumbi lukhuseleko."
Ngelixa umphathi we-SEC wavuma ukuba indawo yezemali iyaqhubeka nokurekhoda iindlela ezintsha zokutshala imali, kubandakanywa amathokheni e-crypto kunye neeNgcaciso eziKhethekileyo zokufumana iiNkampani (SPACs), ezichaza njenge. "iyamangalisa," wagxininisa ukuba:
"Indima yethu kwi-SEC kukuqinisekisa ukuba uluntu lusafumana ukhuseleko olusisiseko."
Usihlalo uqhube wathi: "Yintoni uhlobo oludala kwaye olubaluleke kakhulu lo mbono usisiseko wokuba ukuba unyusa imali eluntwini kwaye uluntu lucinga ngengeniso, kufuneka ubanike isibhengezo esisisiseko nayo yonke into."
Ngeli xesha, xa ebuzwa ukuba athethe ngokukhula kokusetyenziswa kwe-cryptocurrency kwiinkqubo zokufumana imali eninzi, uGensler wachaza ukuba: "Amathokheni eCrypto, ndiya kubabiza, banyusa imali kuluntu, kwaye ngaba babelana noluntu ngeseti efanayo yokubhengeza enceda uluntu ukuba luthathe isigqibo kwaye ngaba bayayithobela iNyaniso yethu kwiNtengiso? Yibize ngokuba yiSecurities Act ngamagatya achasene nobuqhophololo.” Wongeze wathi:
Ngelishwa, uninzi lwaba luzama ukuthi: 'Ewe, asilokhuseleko. Siyinto nje eyenye.’”
USihlalo we-SEC uGensler wenqaba ukuphawula ngeSimo sika-Ethereum
Oko kwathiwa, umninimzi wabuza uGensler malunga nokuba i-arhente yakhe ibona u-Ethereum njengokhuseleko, ebonisa ukuba iKhomishoni ithatha i-XRP yokhuseleko olusekelwe kwisimangalo esiqhubekayo kunye neRipple Labs kunye nabaphathi bayo.
Nangona kunjalo, uGensler akazange anike ingcaciso ngalo mbandela. Umphathi we-SEC uqaphele: “Ndingusihlalo weKomishoni enamalungu amahlanu ekwayi-arhente yogcino lomthetho. Ke, asizibandakanyi kwezi ntlobo zeeforam zikawonke-wonke, sithetha ngayo nayiphi na iprojekthi enye, imeko enye enokwenzeka, kwaye sinikezela ngeengcebiso zomthetho kumaza omoya ngaloo ndlela. ”
tags Cryptocurrency, Umtsalane, iindaba, sec
I-PayPal Yazisa Ukubanakho Ukukhulula I-Stablecoin: I-PayPal Coin
Ngaphandle kwe-bearish rout kwishishini le-crypto, isisombululo sentlawulo i-behemoth PayPal isandula ukubhengeza ukuba isebenza ekukhupheni i-cryptocurrency eyeyakho.
Ngelixa kungekho zinkcukacha malunga nokuba yintoni le cryptocurrency okanye izakuhla nini, iPayPay yaqaphela ukuba iya kuba yi-stablecoin, ixhomekeke kwidola yaseMelika. Kudliwanondlebe neBloomberg News, usekela mongameli omkhulu we-crypto kunye neemali zedijithali kwi-PayPal, uJose Fernandez da Ponte, uqaphele ukuba le projekthi imiliselwe ngokunzulu kuphononongo kodwa “I serious kakhulu,” ngaphandle kokungafumaneki kwezicwangciso zomiliselo ezibambekayo. Nangona kunjalo, isigqeba se-PayPal siqinisekisile ukuba ukuba sivunyiwe, i-stablecoin iya kuhambelana nazo zonke iimfuno eziyimfuneko zokulawula. Waphawula ukuba:
“Siphonononga istablecoin; ukuba kwaye xa sifuna ukuqhubela phambili, ngokuqinisekileyo siya kusebenza ngokusondeleyo nabalawuli abafanelekileyo. "
Ukuba le projekthi ifikelela esikalini, ibonelela ngeenzuzo ezinkulu kwiPayPal. Ngokomzekelo, ngenxa yokuba i-stablecoin, uxinzelelo olulawulayo kwi-token luya kuba luncinci xa luthelekiswa ne-cryptocurrency eguquguqukayo kunye ne-decentralized, evumela abanini ukuba baqiniseke ukuba ixabiso le-asethi yabo liya kuhlala lizinzile ngokuhamba kwexesha. I-stablecoin ikwafanelana nemodeli yeshishini le-PayPal njengomboneleli wesisombululo seentlawulo onemvume.
I-PayPal Coin iza kulandela ukuFumana ukuNxibelelana kweCrypto kunye ne-NEO ngo-2021
I-Dubbed PayPay Coin, iprojekthi yavela ekuqaleni kwe-2022 ngumphuhlisi wesofthiwe uSteve Moser, owathi ngoNovemba wokugqibela-watyhila ukuba ikhowudi ye-PayPal ye-App ibonise iimpawu zokuhambelana nethokheni ye-NEO.
I-NEO yindawo evulekileyo yomthombo webhloko/i-decentralized application (dApp) iqonga elasekwa e-China ngo-2014 kwaye lidume ngokubizwa ngokuba "I-Ethereum yaseTshayina." I-NEO ibonakaliswe kwii-buzzes ezininzi ngexesha le-2017 - 2018 crypto (ICO) boom, njengoko abaninzi beyikhuthaza njengombulali we-Ethereum onokwenzeka.
Nangona kunjalo, lo mbono awuzange uphumelele kwiminyaka eyalandelayo. Ngexesha lokushicilela, ibambe indawo ye-69 kwindawo ephezulu ye-crypto rankings kunye nexabiso le-1.6 yeebhiliyoni zeedola.
tags Cryptocurrency, iindaba, PAYPAL, Stablecoin
I-Bitcoin yaphula i-41,000 yeedola njengabatyali-mali kwi-Stablecoins phakathi kwamaxabiso e-Crypto ePlummeting.
Bitcoin (BTC) kwaye imakethi yemali yedijithali ifumene ilahleko enkulu kule veki, njengoko i-cryptocurrency yokulinganisa yehle ngaphezulu kwe-12% kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo. Kuphela izolo, i-cryptocurrency ifike kwindawo yayo ephantsi ukususela ngoSeptemba, isondela kufutshane ne-$ 40,000 ngeenxa zonke kodwa yamisa phakathi kwi-40,500 yeedola.
Kwakhona, iingxelo zibonisa ukuba umthamo wezorhwebo weBitcoin wehlabathi jikelele ngoMgqibelo wawuyi-23.6 yeebhiliyoni zeedola. Oko kwathiwa, i-cryptocurrency iperi kakhulu ethengiswayo, iTether (USDT), ibalwa kwi-61.4% yazo zonke iintengiso ze-BTC izolo. I-dollar yase-US (i-USD) yeza kwindawo yesibini, ibalwa kwi-14.7% yazo zonke iintengiso ze-BTC. Kwindawo yesithathu, yesine, yesihlanu, neyesithandathu yayiyi-Binance USD (BUSD) kunye ne-6.79% yazo zonke iintengiso, i-South Korean iphumelele (KRW) kunye ne-3.6% yazo zonke iintengiso ze-BTC, i-yen yaseJapan (JPY) kunye ne-3.27% yazo zonke i-BTC. abarhwebi, kunye ne-euro (EUR) kunye ne-3.2% yazo zonke iintengiso ze-BTC ngoMgqibelo.
Okwangoku, i-FTX.US ikhokele ipakethi ngokwentengiselwano yeBitcoin, ilandelwa yiCoinbase, iBitfinex, iKraken, kunye neBitstamp. Umthamo wezorhwebo wehlabathi jikelele we-BTC ngoMgqibelo weza kuphela kwi-23.69% ye-99.6 yeebhiliyoni zeedola kwiintengiso ezipheleleyo ze-crypto kwishishini. Okubangela umdla kukuba, ngelixa i-BTC ibambe kuphela i-23.6 yeebhiliyoni zeedola kumthamo worhwebo lwehlabathi, i-USDT yayalela i-46.7 yeebhiliyoni zeedola, okanye i-46.8%, kwivolumu yorhwebo, igxininisa indiza ukuya kukhuseleko ngabatyali-mali abaqhuba ngakumbi uxinzelelo lwe-bearish kwimarike.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo omawubukele- nge-9 kaJanuwari
Ukulandela ukuphangwa kwayo ukuya kwindawo ephakathi kwe-$40,000, iibhere ze-BTC zibonakala ngathi zithathe ikhefu njengoko ixabiso liphinde lafumana ipatheni esecaleni. I-benchmark cryptocurrency yaphule umgangatho we-41,000 yeedola emva kweengxelo zokuba i-US Fed iceba ukuphazamisa inkqubo yayo yokubamba ibhondi. Oku koyike abatyali-zimali abayingozi, abathathe inqwelomoya ukuya kwii-asethi ezikhuselekileyo.
Oko kuthethiweyo, i-cryptocurrency ephambili kufuneka iqhube umjikelo ongalindelekanga ukuya kwindawo ye-43,000 yeedola - i-44,000 yeedola kwiintsuku ezizayo ukuplaga uxinzelelo lwe-bearish kunye nokumiswa kwakhona ukuze ubuyele phezulu. Nangona kunjalo, ukungaphumeleli okunokwenzeka kweenkunzi zeenkomo ukufezekisa oku kuya kuvula i-BTC ukuya kwi-30,000 yeedola kunye nokwandisa umjikelezo we-bearish.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-43,000 yeedola, i-44,000 yeedola, kunye ne-45,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$41,000, i-$40,000, kunye ne-$38,500.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.96 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 790.4 billion
I-Bitcoin Dominance: 40.4%
← Entsha izithuba1 2 ... 54 abaDala izithuba →